Nepali X Khabar: महिलाहरुले सुरुमा पुरुषको के हेर्छन ???
महिलाहरुले सुरुमा पुरुषको के हेर्छन ???
सुन्दर वस्तु सबैलाई मन पर्छ । आँखाले प्रायः सुन्दर वस्तु नै खोज्छन् । गायिका आनी छोइङ डोल्माको लोकप्रिय गीत 'फूलको आँखामा फूलै संसार…' ले पनि दृष्टिकै वर्णन गर्छ । हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ, तर हेर्नुपर्ने वस्तु एउटै भयो भने मानिसको पहिलो नजर केमा पर्ला ? आधुनिक समाजका ने पाली महिलाहरूको आँखामा के होला ? विवाहित तथा अविवाहित महिलाहरू पुरुषमा सबैभन्दा पहिले के हेर्न चाहन्छन् ? साप्ताहिकले करिब दुई दर्जन सेलिब्रेटी तथा केही छात्रामाझ पुरुषको कुन कुरा सबैभन्दा बढी हेर्छन् भनेर एउटा संक्षिप्त सर्वेक्षण गरेको थियो ।सर्वेक्षणका क्रममा एक युवती पहिलो नजरमा पुरुषमा के हेर्न चाहन्छिन् ? भन्ने ज्ञिजासा राखिएको थियो, जसको जवाफमा विविधता पाइएको छ । सहभागी सबै युवतीको जवाफ एकै ठाउँमा भेला पर्दा यस्तो निष्कर्ष निस्कियो- 'क्युट, फन्नी, गुड लुकिङ, स्मार्ट, खुसी दिन सक्ने, आत्मविश्वासी, पैसा भएको, राम्रो बडी ल्याङ्वेज तथा स्टाइलिस ।'
सर्वेक्षणले केही आश्चर्यजनक परिणाम पनि देखायो । सबै वर्गका महिला समेटिएको यो सर्वेक्षणमा झन्डै ८० प्रतिशत महिलाले पुरुषको व्यक्तित्वलाई सबैभन्दा बढी हेर्ने वस्तुका रूपमा लिएका छन् ।''
जिया केसीको पहिलो नजर भने पुरुषको व्यक्तित्वमा त जान्छ नै, 'तर म उसको ड्रेसअपमा पनि म उत्तिकै ध्यान दिन्छु,' जिया भन्छिन्- 'पहिरनले नै पुरुषको व्यक्तित्व झल्काउने हुँदा उसले कस्तो पहिरन लगाएको छ, त्यसैअनुसार उसको बानीबेहोरा, पारिवारिक पृष्ठभूमि थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ।''
पनि पर्छ ।''
Posted by Lama Babu at 19:20
Labels: Entertainment Gossips